HTML to PDF — MYSTERY ZILLION
မူလ › Web Development › PHP
May 2016 in PHP
I’m searching for something that can output the result of my PHP code to PDF file.
My PHP code fetch result from MySQL database.
How can I make it work using mPDF?
May 2016 Administrators
Document - https://mpdf.github.io ကိုဖတ်ပြီးတော့ အရင်ဆုံးစမ်းပါ စမ်းရင်းနဲ့မှ Error တက်လာတယ် ရှင်းလို့မရဘူးဆိုမှ Error ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပြန်မေးမှပဲ ဖြေပေးလို့ရပါလိမ့်မယ်
May 2016 Registered Users
May 2016 edited May 2016 Registered Users
အပေါ်က ပုံမှာလို့ php codes တွေပေါ်နေတယ် bro
အပေါ်က code က
pdf ပြောင်းတဲ့ code bro
PHP Code တွေပေါ်မှာပေါ့ file_get_contents('price_master.php') ဆိုမှတော့ price_master.php ဆိုတဲ့ File ထဲက ရေးထားတဲ့ code တွေပဲပါလာမှာ အဲဒီ့နေရာမှာ ကိုယ်ပြချင်တဲ့ Database ထဲက Data ကိုဖတ်ပြီးတော့ ထည့်ပေးရမှာ
May 2016 edited May 2016 Administrators
ရေးထားတာကို မှန်းကြည့်တာကတော့ price_master.php ကို Browser ကနေ ခေါ်လိုရပုံရတယ် Full URL ကို http://host/prefix/price_master.php လို့ယူဆလိုက်မယ် စမ်းတဲ့အခါပြင်ပြီးစမ်းပါ။
အဲ့ဒါနဲ့ အဆင်မပြေဘူး bro
$html = '<h2>Resume</h2>';
$query = "SELECT * FROM wp_resume order by id desc limit 1";
$result = mysqli_query($con,$query);
$html .= '<div>
<label>First Name</label> '. $row['firstName'].'<br>
<label>Last Name</label> '.  $row['lastName']. '<br>
အပေါ်က code လိုမျိုးရေးရင်တေ့ာ
ကျနော့် အထင်အရ သိပ်နည်းလမ်းမကျဘူးထင်ရတယ်
အခြားနည်းလမ်းရှိသေးလား bro :-?
စဉ်းစားလို့ရတာက ၂ နည်းပဲရှိတာပဲလေ ရှိပြီးသား URL က HTML Content ကိုပြချင်ရင် file_get_contents() လိုဟာနဲ့ယူပြ အဲဒါမှာပြဿနာတခုက URL ဟာ Public မဟုတ်ပဲ Authentication လိုရင်တော့ အဲလောက်မလွယ်ဘူး ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ အခုခင်ဗျားရေးထားသလို Data တွေကို HTML ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ် အဲဒါတွေကို PDF ပြန်ထုတ်ပေါ့ နည်းလမ်းကျတယ် မကျဘူးတော့ မရှိပါဘူး ဘယ်လိုဟာကို နည်းလမ်းမကျဘူး ထင်လို့လဲပြော
@kyawzinthant အရင်ဆုံးအလုပ် ဖြစ်ဖို့ က ပထမ ပဲ ဘယ်ဟာကို နည်းလမ်းမကျဘူးလို့ ထင်တာလဲ မသိဘူး ?
ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ view file ထဲမှာရှိတဲ့ code တွေကို variable တစ်ခုထဲထည့်ရလို့ B-)